A-1 ~ I-Arch Rubber eNye ...
A-2 ~ Ukuquqelwa kwe Arch Rubber yesibini ...
I-A-3 ~ i-Arch Rubber Expane ...
A-4 ~ I-Spool Type Rubber Expa ...
Imveliso yearch eyodwa inokunciphisa ukungcungcutheka nengxolo, enokuphinda isombulule ii-axial / lateral / angular intshukumo / iingxaki ze-eccentric. Ukuqiniswa kocingo lweentsontelo ngeentambo zikaNaylon kunye nasemaphethelweni omabini ngeentsimbi zentsimbi eziqinileyo. Iifleji zentsimbi ezintantayo ziqhutywa ngokwe-DIN, ANSI, BS, JIS kunye neminye imigangatho. Ukuba uxinzelelo lombhobho luphakame kakhulu, iibheringi eziqinisiweyo kufuneka zidityaniswe kunye ne-flanges.
A-9 ~ Ezinye iimveliso
Irubber gasket ine-oyile yokumelana ne-acid, ukumelana ne-alkali, ukubanda nobushushu, ukumelana nokuguga kunye nezinye iipropathi. Ngokusekwe kwiinjongo ezahlukeneyo zokusebenzisa, izinto zerabha zegasket zahlukile. Sinokwenza iirhasi kwi-EPDM, iBuna, irabha yendalo. Ukuba ufuna izinto ezizodwa, sinokuhlangabezana nazo iimfuno.
I-elastomers idityaniswa kunye ne-flanges mating, kunye nemilinganiselo eyahlukeneyo kunye noxinzelelo olwahlukileyo. Ngamanye amaxesha, abathengi bafuna ukuba sibathengele, bathunyelwe kunye kunye namalungu erabha.
Imibutho yabasebenzi inyibilikisiwe isetyenziswa Xa umdibaniso woqoqosho osetyenziselwa intambo ufuneka, umphezulu womanyano uyafumaneka kwaye ushukumisa umbane. Zombini iziphelo zinikezelwe ngumdibaniso wesinyithi onokubakho ngentambo yabasetyhini okanye i-ANSI.
Uhlobo lwe-rubol edibeneyo luhlobo lodidi, kunye nekhola yensimbi eqiniswe entanyeni yomzimba. I-stype ye-ST isebenzisa iringi yokugcina ukukhanya ukuxhasa ukufakelwa kombane. I-STF igcwele i-arch, nge-50% ye-ST evunyiweyo yokuhamba, kodwa inamaxesha ama-4 amaxesha entwasahlobo kunokuba arch ayisiyindawo.
Inkqubo ye-arch ebanzi yindawo yokudityaniswa eyandisiweyo, ngokudibeneyo kwaye ngaphandle kokuqiniswa kwensimbi entanyeni yomzimba. I-arch ebanzi ivumela ukuhamba okukhulu kunye namaxabiso asentwasahlobo asezantsi athelekiswa nohlobo lwe-spool. I-WA kunye ne-WAF isetyenziselwa ukudibanisa ububanzi be-arch ebanzi yoqoqosho. I-WAF igcwele i-arch, ngama-50% eentshukumo ezivumelekileyo ze-WA, kodwa inamaxesha ama-4 entwasahlobo kunobubanzi obukhulu.
A-2 ~ Ukudityaniswa kwe-Arch Rubber eNyeneyo
Iimveliso ezi-arch ezimbini zisetyenziswa apho intshukumo engaphezulu ifuneka khona. Ukuba uxinzelelo lombhobho luphakame kakhulu, iibheringi eziqinisiweyo kufuneka zidityaniswe kunye ne-flanges. Ukuqiniswa kocingo lweentsontelo ngeentambo zikaNaylon kunye nasemaphethelweni omabini ngeentsimbi zentsimbi eziqinileyo. Iifleji zentsimbi ezintantayo ziqhutywa ngokwe-DIN, ANSI, BS, JIS kunye neminye imigangatho.